သင့်ရဲ့ DV ထီမေးခွန်းကိုအဖြေတစ်ခုရယူလိုက်ပါ
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) ကထုတ်ပေးသောတစ်ဦးကအစိမ်းရောင်ကဒ်, သငျသညျအသကျရှငျနဲ့အမြဲတမ်းအခြေခံပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာဒုက္ခသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ် asylee အဖြစ်မိသားစု, အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ် status ကိုမှတဆင့်အပါအဝင်အစိမ်းရောင်ကတ်ရဖို့နညျးလမျးမြားစှာမဟုတ်ဘဲလူတိုင်းငျြးပွညျ့မီ, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ထဲကတဦးတည်း (လူကြိုက်များသောအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအဖြစ်လူသိများ) ကိုမတူကွဲပြားခြင်းပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာ (DV) Program ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျပန်းပုံဆွဲ၏ရလဒ်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီး 50000 လူဝင်မှုဗီဇာန်းကျင်နှစ်တိုင်း DV program ကိုကိစ္စရပ်များကို။ အဆိုပါဗီဇာယူအက်စ်မှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၏သမိုင်းကြောင်းအနိမ့်မှုနှုန်းနှင့်အတူနိုင်ငံပေါင်းအကြားခွဲဝေနေကြသည်
အဆိုပါ DV ထီစတင်သည်သည့်အခါ?
အဆိုပါ DV Program ကိုများအတွက်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ကာလပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလ 1 နှင့်နိုဝင်ဘာလ3အကြားပြေး။ အဆိုပါ DV-2021 အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီများအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကို-up, ကာလဖွယ်ရှိပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနသေးယခုနှစ်ထီနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ချိမမူအောက်တိုဘာလ 2, 2019. အပေါ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။
DV-2022 လို့ခေါ်တဲ့ထီကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာဘာလို့စတင်တာလဲ။
လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ - နို ၀ င်ဘာလတွင်လက်ခံမည်ဖြစ်သော်လည်းထီရလဒ်များကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလတွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။
DV-2022 ကို ၂၀၂၀ မှာကျင်းပမှာလား။
ဟုတ်တယ်။ Covid-19 ကပ်ရောဂါသည်အရာခပ်သိမ်းကိုသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းထီထိုးခြင်းကို ၂၀၂၀ တွင်ကျင်းပသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက http://my.dvlottery.me/blog/1300-when_dv_lottery_covid တွင်ကြည့်ရှုပါ။
ဘယ်နှစ်ယောက်ဗီဇာ DV-2021 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပေးခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နည်း လူဘယ်နှစ်ယောက်ဆုရရှိသူဖြစ်လာလိမ့်မည်နည်း
အဲဒီမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှအဘယ်သူမျှမသတင်းအချက်အလက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပညတ်တရားအားဖြင့်, 55,000 မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာ (DVs) ၏အများဆုံးနှစ်စဉ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လှည့်ပတ် 110,000 တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထီ၏ဆုရရှိသူအဖြစ်ပထမဦးဆုံးမှာကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်, ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်နှစ်ခွဲနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဗီဇာမရကြလိမ့်မည်နောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ပေးန်းကျင် 55,000 ဗီဇာရှိရလိမ့်မည်။
ဘယ်နှစ်ယောက် DV-2021 ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတစ်ခုချင်းစီကိုဒေသနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီတိုင်းပြည်အတွက်ထုတ်ပေးလိမ့်?
တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံ၏ကမှထုတ်ပေးဖြစ်ကြောင်းဗီဇာအရေအတွက်ထူထောင်ဒေသတွင်းကန့်သတ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ဘယ်လောက်တွေဟာလည်းတစ်ဦးချင်းစီနိုင်ငံကနေ လာ. , မည်မျှရွေးချယ်ထားတွေဟာလည်း၏ဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီတွေ့ရသည်။ ရရှိနိုင်သည့်စုစုပေါင်းပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုနောက်တဖန်မ7ထက်% ဆိုတစ်ခုတည်းတိုင်းပြည်ကမှသွားနိုင်ပါတယ်။
https://www.dvlottery.state.gov: Applications ကိုသာပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်ကိုလက်ခံနေကြတယ်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုသင်ကိုယ်စားပုံစံဖြည့်သူကိုကြားခံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှု USCIS နေဖြင့်စိတ်ပျက်အားလျော့သည်။
DV ထီအတွက်အစိမ်းရောင်ကဒ်အနိုင်ရအခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်ပုံမှန်အတိုင်းထီတစ်သန်းအနိုင်ရထက်ပိုများသည်။ သငျသညျ http://my.dvlottery.me/win-chances-green-card-lottery မှာတစ်ခုချင်းစီကိုတိုင်းပြည်အတွက်အနိုင်ရတဲ့၏ရာခိုင်နှုန်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏မှတ်မိသာအမှန်တရားရေး, မုသာမသုံးကြဘူး။ သာအင်္ဂလိပ်စာလုံးကိုသုံးပါ။
သင်တန်းသားများကိုစာရေးတစ်ဦးမှန်ကန်သောဓာတ်ပုံကိုပေးအပ်မှာကျရှုံး။ USCIS ကိုအလိုအလျောက်ဓာတ်ပုံများလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံရှိသည်မဟုတ်ထားတဲ့ applications များ disqualify ။ ဦးခေါင်းအရွယ်အစားနောက်ခံကနေအများအပြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ဒါကြောင့်သင် https://my.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo တူသောအထူးဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပွုနိုငျ
သင့်မိသားစုတစ်ခုချင်းစီအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖွဲ့ဝင် (အိမ်ထောင်ဖက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေးများ, မိဘများ) (အနကျအဓိပ်ပါယျအဖြစ်အိမ်ထောင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်သားသမီးနဲ့တူအခြားမိသားစုဝင်တွေပေး) ကိုအဓိကတွေဟာလည်းအတိုင်းထီမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
အဲဒီမှာလျှောက်ထားမှုအတွက်အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကြောင့်အထက်တန်းပညာရေးလိုအပ်ချက်များကြောင့်ထိရောက်စွာ 18 နှစ်နှစ်အောက်သူကိုအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး disqualify ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မ US မှာအသက်ရှင်လျှင်ငါ DV program ကိုရိုက်ထည့်ပါနိုင်သလား?
သငျသညျပြီးသားဗီဇာမဆိုအမျိုးအစားရှိပါကဟုတ်ကဲ့, သင် DV ထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ငါပြီးသားအခြားကဏ္ဍတစ်ခုလူဝင်မှုဗီဇာမှတ်ပုံတင်တယ်။ ငါဆဲ DV Program ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသလား?
အမေရိကန်အစိုးရငါ့ကို USA တွင်အခြေချရန်ကူညီပေးမလဲ ဒါကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်အခြားအဖိုးအခပေးဆောင်ကြမည်နည်း
အဆိုပါ DV ထီဘို့မဆိုအခကြေးငွေရှိပါသလား?
အဲဒီမှာဝင်ဘို့အဘယ်သူမျှမကြေး, ဒါပေမဲ့သင်ရွေးချယ်ထားသောခဲ့ကြသည်လျှင်သင်ဆေးစစ်ခြင်းနှင့်လူတစ်ဦးနှုန်းအင်တာဗျူးများအတွက် $ 330 လောက် $ 215 ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်သင်ဗီဇာလျှောက်လွှာ၏အချိန်မှာသာအယူအက်စ်သံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာလူတစ်ဦးအတွက်လူဝင်မှု application ကိုဗီဇာအခကြေးငွေပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ မေးလ်, Western Union, သို့မဟုတ်အခြားငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်မည်သူမဆိုဖို့ DV ကြေးငွေမပို့ပါနဲ့။
ငါ DV လျှောက်ထားပေမယ့်တဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးဆိုရငျ, ငါ paid ဗီဇာကြေးတစ်ပြန်အမ်းငွေရနိုင်မလဲ?
အမှတ်ဗီဇာလျှောက်လွှာကြေးငွေပြန်အမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ဦးကောင်စစ်ဝန်အရာရှိဆုံးဖြတ်သည် အကယ်. သင်ကဗီဇာမဆိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြဘူး, သို့မဟုတ်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥပဒေအောက်မှာ DV များအတွက်မဟုတ်ရင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ, အရာရှိတစ်ဦးဗီဇာထုတ်ပေးလို့မရဘူးနှငျ့သငျ paid အားလုံးအဖိုးအခလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူသည်တရားဝင်အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအစီအစဉ် (DV-2021) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲ
သငျသညျဖြည့်ဆည်းရမယ်နှစ်ခုသာစံရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာတဦးတည်း: မွေးဖွားခြင်း (သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့သို့မဟုတ်မိဘ၏တိုင်းပြည်) ၏သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ငံများစာရင်းထဲတွင်ဖြစ်ရမည်။ ဒုတိယအချက်မှာဦးတည်း: သင်ကအနည်းဆုံးတစ်ဦးအထက်တန်းကျောင်းပညာရေးရှိသည်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လိုအပ်သည်တစ်ခုသိမ်းပိုက်အတွက်အတိတ်ကာလငါးနှစ်အတွင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံ၏နှစ်နှစ်ရှိရမည်။
အဘယ်အရာကိုမိသားစုဝင်များငါအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအဘို့အကြှနျုပျ၏ entry ပေါ်မှာပါဝင်သည်ရမလဲ
သင်လက်ရှိအသက် 21 နှစ်အောက်သူ့ကို / သူမ၏အပေါင်းတို့နှင့်တစ်ကိုယ်ရေသားများမှကွဲကွာနေကြလျှင်ပင်သင်၏လက်ရှိအိမ်ထောင်ဖက် (ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း) စာရင်းပြုစုရပါမည်။
ငါဘယ်နှစ်ယောက် applications များတင်သွင်းနိုင်သလဲ
တစ်ဦးတည်းသာနှစ်စဉ်စဉ်အတွင်း, ဒါပေမယ့်အိမ်ထောင်ဖက်သီးခြား entries တွေကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်တို့ကိုလည်း https://my.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo ကနေမှန်ကန်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရနိုင်
သငျသညျပုံစံဖြည့်စွက်ရန်မိနစ် 30 ရှိသည်။ သငျသညျ 30 မိနစ်န့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နှင့်သင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, စနစ်ပြီးသားထဲသို့ဝင်မဆိုသတင်းအချက်အလက် discard လုပ်။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးအရာကိုသင်ထီမတိုင်မီ https://my.dvlottery.me/ds-5501-edv-form အွန်လိုင်းမှာလေ့ကျင့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်, သင်အမှန်တကယ်တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်မှာအမှန်တကယ် form မှာဖြည့်ဆည်း start အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌သင်၏အပုံစံကိုဒေတာအဆင်သင့်ရှိသည်။
Download ပြုလုပ်လျက်သိမ်းဆည်းသည့် DV ထီပုံစံစကားလုံးတစ်လုံး processing ပရိုဂရမ်သို့နှင့်နောက်မှပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလော
အဘယ်သူမျှမကသင်သည်သာအွန်လိုင်းပုံစံကိုဖြည့်ပါနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အကယ်. သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အ https://my.dvlottery.me/ds-5501-edv-form ကိုသုံးနိုင်သည်။
အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့အလွန်အမင်းသင်အွန်လိုင်းပုံစံဖြည့်ရန်စတင်မတိုင်မီလုံးဝအားလုံး DV ညွှန်ကြားချက်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သို့သော် အကယ်. သင်ဤများအတွက် https://my.dvlottery.me/ds-5501-edv-form ကိုသုံးနိုင်သည်။
စနစ်ငါ၏အ entry ကိုပယ်ချပါက, ငါသည်ငါ့ entry ကို re-တင်သွင်းနိုင်သလဲ
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ထီ၏ဇာတ်သိမ်းမတိုင်မီ re-တင်ပြရန်သင့်ရဲ့ entry ကိုလို့ရတယ်။ သင်တစ်ဦးပြည့်စုံလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းအသိပေးစာပို့သည်အထိလိုအပ်သောဖြစ်သကဲ့သို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာအဖြစ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအတည်ပြုချက်အသိပေးစာလက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင့် entry ကိုပြီးပြည့်စုံသည်, သင်သည်မည်သည့်အပိုဆောင်း entries တွေကိုတင်ပြရန်မပေးသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမကြာမီငါသည်ငါ့ entry ကိုတင်သွင်းပြီးနောက်ငါအီလက်ထရောနစ်အတည်ပြုချက်ကိုအသိပေးစာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်နည်း
သငျသညျအတည်ပြုချက်ကုဒ်အပါအဝင်ချက်ချင်းအတည်ပြုချက်အသိပေးစာလက်ခံရရှိသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နှောင့်နှေးဖြစ်ပျက်။ ပြည့်စုံ application ကိုစလှေတျတျောနှငျ့သငျအတည်ပြုချက်အသိပေးစာလက်ခံရရှိသည်အထိလိုအပ်သကဲ့သို့သင်တို့ခလုတ်ကို "Submit" အဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထိမှန်နိုင်ပါတယ်။
ငါက "Submit" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်အတည်ပြုချက်အရေအတွက်ကမခံမယူခဲ့ပါဘူး။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ?
သငျသညျအတည်ပြုချက်အရေအတွက်ကမခံမယူခဲ့ပါဘူး, f, သင့် entry ကိုမှတျတမျးတငျထားမခံခဲ့ရပါဘူး။ သင်သည်အခြား entry ကိုတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာပုံတူအဖြစ်ရေတွက်မည်မဟုတ်ပါ။
DV ထီပရိုဂရမ်မှတဆင့်သာအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများသင်တို့နှင့်အတူရှိသွားနိုင်ပါတယ်။ တခြားဆွေမျိုးတွေအဘို့အသငျသညျအကြာတွင်မိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်းဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်အများကြီးယူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မခံယူချက်ရှိပါကငါ DV ထီထဲမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူနိုင်သလား?
အဲဒီမှာပြစ်မှုထင်ရှားသူလူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်, သို့သော်ဗီဇာထုတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအပေါ်မူတည်ကြောင်းသတိရပါ။
က DV ထီသာရုံတက္ကသိုလ်ပြီးဆုံးကြသူလူငယ်များအဘို့ဖြစ်၏မှန်ပါသလား?
အဲဒီမှာဆွေမျိုးသားချင်းသို့မဟုတ်ငွေအလုံအလောက်, ရှိပြီးသား USA တွင်အလုပ်ရှိသည်ဖို့ရှိပါသလား?
အဆိုပါ DV ထီအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဘို့သင့်ကိုအမေရိကန်အတွက်အလုပ်အကိုင်အသို့မဟုတ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမလိုအပ်ပါဘူး, သင် USA တွင်ဆွေမျိုးများရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, သင်ပိုက်ဆံမဆိုတိကျတဲ့ငွေပမာဏကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
ငါဘယ်လိုအနိုင်ရအကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်နည်း ငါ၏အအမေရိကန်နိုင်ငံအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီရလဒ်များကိုစစ်ဆေးဘယ်လိုနေသလဲ? ငါအကြောင်းကြားစာရကြလိမ့်မည်နည်း
ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနသင်ရွေးချယ်ထားသောခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အီးမေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည်အထိမစောင့်ပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အား အသုံးပြု. E-DV က်ဘ်ဆိုက် http://dvlottery.state.gov/ အပေါ်တွေဟာလည်းအခြေအနေစစ်ဆေးမှုမှတဆင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်သင့်ရလဒ်စစ်ဆေးပါ။ ဒါဟာရှာဖွေတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးမေလ 2020 ဝန်းကျင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။
ငါအီးမေးလ်ဖြင့်သို့မဟုတ်စာတိုက် mail ဖြင့်ပြည်နယ်များ၏ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်နည်း
အမေရိကန်အစိုးရကိုသူတို့ရှေးခယျြခဲ့ကြသဖြင့်, DV-2021 အစီအစဉ်အတွက်ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အီးမေးလ်သုံးစွဲဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကြားရန်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့ခဲ့ပေ။ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန mail ဖြင့်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော Western Union အဖြစ်န်ဆောင်မှုအားဖြင့်ငွေပို့မှသင့်အားမေးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ http://dvlottery.state.gov မှာအွန်လိုင်း DV တွေဟာလည်းအခြေအနေစစ်ဆေးမှုစာမျက်နှာကိုသွားနေဖြင့်မေလ 2020 အတွက်ထီဆုရှင်များမှာလျှင်သင်အထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးစက်တင်ဘာလ 2021 ၏အဆုံးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဘယျသို့အကြှနျုပျသအတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားဆုံးရှုံးလျှင်? DV ထီအဘို့အကြှနျုပျ၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရအတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦးက tool ကိုသင်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုပေးရန်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးရာတွေနဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားပြန်လည်ရယူခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု E-DV က်ဘ်ဆိုက်၏တွေဟာလည်းအခြေအနေစစ်ဆေးမှုစာမျက်နှာအတွက်ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
သင့်ရဲ့ status ကိုစစ်ဆေးသို့မဟုတ်သင့်အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားပေးရန်မတခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးနှင့်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးနှင့်ကီကောင်စစ် Center ကဒီလိုလုပ်ဖို့နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်များ၏ဦးစီးဌာနဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုစာရင်းတစ်ခုပေးနိုငျခဲ့ဘူး။
အစိမ်းရောင်ကဒ်ထီအနိုင်ရသင့်ရဲ့အလိုအလြောကျအစိမ်းရောင်ကဒ်ရရှိမှုမထားဘူး။ သငျသညျအနိုင်ရဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းများမှာပါကဆိုလိုတယ်အားလုံးသင်တစ်ဦးအစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားရန်အခွင့်အလမ်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ DV Program ကို၏တရားဝင် Web-site ကို http://dvlottery.state.gov/ ပေါ်တွင်သင်၏အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားစစ်ဆေးသင့်နှငျ့သငျအနိုင်ရခဲ့လျှင်ဒီတော့သင်ကထပ်မံညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူထိုအရပ်မှအတည်ပြုချက်စာမျက်နှာညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောနေကြသည်လျှင်သင်အတိအကျထီပုံစံကဲ့သို့တူညီသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ DS-260 လူဝင်မှုဗီဇာ form မှာဖြည့်ဖို့လိုအပျပါမညျကြောင့်, ထီပုံစံဖြည့်စဉ်ကာလအတွင်းအာရုံစိုက်။ ကျနော်တို့ကထီပုံစံဖြည့်စွက်အတွက်ကူညီပေးသည်သူမည်သူမဆိုကိုမသုံးဖို့အကြံပြုဒါကြောင့်ပါပဲ။ သင်တို့အဘို့ DV ထီလျှောက်လွှာထဲမှာဖြည့်ဖို့ဆိုကြားခံသို့မဟုတ်တတိယပါတီန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လျှောက်ထားရန်ပိုကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အတွက်ဖြည့်ပါ, ပြီးတော့သင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေတာကိုအောကျမေ့ကြပါပြီဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပုံစံ၌သင်တို့၏ဝစွာရှေ့၌သင်တို့ DV ထီပုံစံကိုကယ်တင်နှင့် print ထုတ်မှ https://my.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo ဒါပြီးရင်နိုင်ပါတယ်သုံးပြီးအကြံပြု အဆိုပါ DS-260 လူဝင်မှုဗီဇာပုံစံပေါ်တွင်အတူတူဒေတာကိုသုံးပါ။
အဆိုပါ DV-2021 အစီအစဉ်တွင်အနိုင်ရ၏အမှု၌, သင်စက်တင်ဘာလ 30, 2021. ကတဆင့်ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီအတိုင်းဤလုပ်ဖို့အကြံပြုသည်အောက်တိုဘာလ 1, 2020 ကနေဖြစ်သည့်အတွက်အမေရိကန်အစိုးရဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2021, စဉ်အတွင်းတစ်ခုသာဗီဇာလျှောက်ထားခွင့်ရှိသည် ဖြစ်နိုင်ပါ။
တစ်ဦးကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာအောင်မြင်သောအင်တာဗျူး၏အမှု၌သင်တို့ကို6လကြာတဲ့ဗီဇာရလိမ့်မယ်, ဤအချိန်ကာလအတွင်းကသင်၏ဗီဇာဿဟာယပျက်လိမ့်မည်အဲဒါကို recover လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်မယ့်သင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံမှမရွှေ့ကြပါလျှင်။
ဟုတ်ကဲ့, သင်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာသင့်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်ပြီးဗီဇာထုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအပေါ်မူတည်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်ဗီဇာရဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်သောမရှိကြပေ။
ဒါဟာမြင့်မားသင် DV ထီတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှေ့၌သင်တို့တိုင်းပြည်ကထုတ်ပေးခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိသည်အကြံပြုသည်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပါကသင်ထီ form မှာဖြည့်မတိုင်မီဒီတော့သင်တဦးတည်းရယူသင့်ပါတယ်။
အလယ်မှာနာမည်သတိထားပါ။ သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအမည် (2 အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်) ကို double ဖြစ်ပါတယ်လျှင်သင် "ပြီးခဲ့တဲ့ / မိသားစုအမည်" လယ်ပြင်လုံးကိုစိတျအပိုငျးစာရင်းပြုစုသင့်တယ်။ ထိုသို့သင်တဦးတည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်ဦးအလယ်နာမည်အဖြစ်ထားမည်ဆိုပါက, ထို့နောက်သင်သည်အရည်အချင်းပျက်ယွင်းလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်နောက်ပထမဦးဆုံးအသို့မဟုတ်အလယ်နာမည်ရှိမထားဘူးဆိုရင်ဒါဟာ "အမည်မရှိ" box ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ချန်လှပ်နိုင်ပါသည်။
သင်တို့၏နာမ၌သငျ "crotchets" နဲ့တချို့စာလုံးတွေရှိပါကရုံအလားတူအင်္ဂလိပ်အက္ခရာမှသူတို့ကိုပြောင်းပေးပါ။ စသည်တို့ကို "ဎ" ကို 'o "," N "ကိုအင်္ဂလိပ်လို"a"ကိုရန်ပြောင်းလဲမှု," O "နိုင်ပါတယ်"a"ဥပမာအားဖြင့်
ငါ့နာမကိုမွေးဖွားလက်မှတ်, ငါ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစာလုံးပေါင်းရှိပါတယ်။ ငါသည်အဘယ်သို့နာမတော်ကိုအသုံးပြုသင့်သလဲ
သငျသညျအတိအကျအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ၌သင်တို့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၌ရှိသကဲ့သို့သင်တို့၏နာမကိုရေးသင့်ပါတယ်။ ID ကိုကဒ်မွေးဖွားခြင်းလက်မှတ်နှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများပေါ်တွင်သင်၏နာမတျော၏စာလုံးပေါင်းအရေးမထားဘူး။ ဤသည်ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနတို့ကထောက်ပံ့ပေးသည့်ညွှန်ကြားချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်: https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2018-Instructions-Translations/DV- 2018% 20Instructions% 20English.pdf
ဒြပ်စင်အမိန့်အာရုံစိုက်။ ဒါဟာအမေရိကန်နေ့စွဲအမိန့်ဖြစ်တယ်, ဒါပထမဦးဆုံးအသငျသညျလ (မနေ့က) ထားသင့်ပါတယ်, ထို့နောက်နေ့နှင့်ပြီးခဲ့သည့်တနှစ်တွင်သည်။
သင်ကမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့အဘယ်မှာရှိ 4. City,
သင်ကမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့ဘယ်မှာ 5. နိုင်ငံ
ဒါကြောင့်အမည်ပြောင်းသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ခံခဲ့ရလျှင်ပင်တိုင်းပြည်၏ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာနာမကိုအမှီ Specify ။ ဒါ့အပြင်အဲဒါကိုသင့်ရဲ့ဖွားမြင်၏နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်, သင့်နေအိမ်သို့သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားတစ်တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ DV Program ကိုများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝ၏ 6. နိုင်ငံ
အဲဒီအစားသင့်ရဲ့ကလေးမွေးဖွားတိုင်းပြည်သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိဘများ၏ကလေးမွေးဖွား၏တိုင်းပြည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအရည်အချင်းမပြည့်မှီသို့မဟုတ်နိုင်ငံထက်အနိုင်ရနိမ့်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်လျှင်, သင်တိုင်းပြည်ရွေးနိုင်သည်။
ဤတွင်အဘယ်သူ၏က DV-2020 ဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ငံများစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
အဆိုပါ Cote d'Ivoire ၏ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ (အိုင်ဗရီကို့စ်)
* ဣသရေလအမျိုး, ဂျော်ဒန်, ဆီးရီးယား, အဲဂုတ္တုပြည်မှ, အသီးသီး Persons ဆီးရီးယား, အစ္စရေး, ယော်ဒန်မြစ်ခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ဇွန်လ 1967 မှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတှငျမှေးဖှား, အဲဂုတ္တုနှောဖြစ်ကြသည်။ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတှငျမှေးဖှားပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဲဂုတ္တုနှောပါ၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင်မွေးဖွားပုဂ္ဂိုလ်များယော်ဒန်မြစ်နှောပါ၏ ဂိုလန်ကုန်းမြင့်တွင်မွေးဖွားပုဂ္ဂိုလ်များဆီးရီးယားနှောဖြစ်ကြသည်။
** ဟောင်ကောင် S.A.R. (အာရှဒေသ), မကာအို S.A.R. (ပေါ်တူဂီနှောဥရောပဒေသ), နှင့်ထိုင်ဝမ် (အာရှဒေသ) အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူး, ဒီမှာစာရင်းနေကြသည်။ သာမတူကွဲပြားမှုအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, လူပုဂ္ဂိုလ်များမကာအိုတွင်မွေးဖွား S.A.R. ပေါ်တူဂီထံမှရထိုက်ခွင့်ရယူထားခြင်း။
** မကာအို S.A.R. အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးနှင့်အထက်သာမတူကွဲပြားမှုအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်စာရင်းလျက်ရှိ၏ မကာအို S.A.R. တှငျမှေးဖှားပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်တူဂီထံမှရထိုက်ခွင့်ရယူထားခြင်း။
*** သာမတူကွဲပြားမှုအစီအစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်သီးခြားစီကုသနေပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းနှင့်ခြေစစ်ပွဲဒေသများအကြားစာရင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။
Nauru ကျွန်း၏ Micronesia ပြည်ထောင်စု
တောင်အမေရိက, Central America, နှင့်ကာရစ်ဘီယံ
ဤတွင်အဘယ်သူ၏က DV-2019 အတွက်အကျုံးမဟုတ်နိုင်ငံများစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ဂရိတ်ဗြိတိန် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) အောက်ပါမှီခိုဧရိယာများပါဝင်သည်: အန်ဂွီလား, ဘာမြူဒါ, British Virgin Islands, ဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို, ကေမန်ကျွန်းစုဖောက်ကလန်ကျွန်းစု, ဂျီဘရောလ်, မွန်ဆာရတ်, Pitcairn-, တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုစိန့်ဟယ်လီနာနှင့် တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများ။
ငါရထိုက်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဘာအငြင်းပွားနယ်မြေ (ဥပမာရိုင်း) ရက်နေ့တွင်နထေိုငျ?
သင်သည်မည်သည့်အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး / သံရုံးကိုခေါ်သူတို့ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ငါရထိုက်ခွင့်နိုင်ငံများစာရင်းတွင်မဖြစ်သည့်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါမတူကွဲပြားခြင်းထီ (DV-2021) တွင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူနိုင်သလား?
7. တွေဟာလည်းပုံ Photograph
အရွယ်အစားရင်ပြင်, 600x600 pixels ကို
JPEG, အတွက် (.jpg) ဖိုင်ပုံစံ
အဘယ်သူမျှမကပို 240 ထက် KB (ကီလိုဘိုက်) ဖိုင်အရွယ်အစားအတွက်
ဦးခေါင်းအရွယ်အစားဦးခေါင်းထိပ်မှ 50% နှင့်မေးစေ့၏အောက်ခြေကနေ image ကိုဖွင့်သည်စုစုပေါင်းအမြင့်၏ 69% အကြားဖြစ်ပါသည်
မျက်စိဓာတ်ပုံ၏အောက်ခြေကနေ 69% အထိ 56% အကြားတည်ရှိသည်
သင့်လက်ရှိအသှငျအပွငျကိုထင်ဟပ်ဖို့နောက်ဆုံး6လအတွင်းခေါ်ဆောင်သွား
တိုက်ရိုက် facing ကင်မရာ Full-မျက်နှာအမြင်အတွက်ယူ
ယူနီဖောင်းနေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ကြောင်းဘာသာရေးအဝတ်အစား မှလွဲ. သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဝတ်ဆင်မဖြစ်သင့်
ဘာသာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ဘဲနေလျှင်, ဆံပင်သို့မဟုတ် hairline တော်ကိုမိုက်စေသောတစ်ဦးထုပ်သို့မဟုတ်ခေါင်းဖုံးမနေပါနဲ့
သငျသညျ https://my.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo မှာ Visafoto နေဖြင့်2စက္ကန့်အတွင်းအားလုံးလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ဓါတ်ပုံကိုရနိုင်။ မှန်ကန်စွာဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒီလမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ: https://my.visafoto.com/en/guide
သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမမှန်ကန်လျှင်သင့်ရဲ့ထီလျှောက်လွှာအကြာတွင်ပယ်ချလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင်က DV ထီပုံစံဓာတ်ပုံ upload တင်ကြသောအခါ, ကမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ခြင်းမရှိဘဲ, မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောဆိုဓါတ်ပုံ, လက်ခံလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမမှန်ကန်ကြောင်းအရွယ်အစားသို့မဟုတ်တစ်ကားကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုအစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ upload တင်ပါလျှင်မရှိသ error message ကိုဖွစျလိမျ့မညျနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းသည့်အခါဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်သို့မဟုတ်မပါလျှင်သိရန်လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်မမှန်ကန်ကြောင်းဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအားလုံး applications များအရည်အချင်းပျက်ယွင်းလိမ့်မည်။ ထိုသို့သင်အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်လွှာပုံစံကိုဖြည့်ရှေ့၌သင်တို့ဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်လျှင်သိရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ငါ၏အ DV ထီဓာတ်ပုံကိုမှန်ကန်လျှင်အဘယ်မှာငါအတည်ပြုရန်နိုင်မလဲ?
သင်ကအပြည့်အဝစိစစ်အတည်ပြုမ https://my.dvlottery.me/dv-lottery-photo-checker မှာဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ အမေရိကန်ဦးစီးဌာနပြည်နယ်၏ website တွင်အဆိုပါဓာတ်ပုံ Tool ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မျက်စိသို့မဟုတ်နောက်ခံယူမအရှိဆုံးဖုန်းများ, တက်ဘလက်နှင့်အချို့သောလက်ပ်တော့အပေါ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ထို့ကြောင့်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ပေ; သင်ဓာတ်ပုံ Tool ကို https://my.visafoto.com/en/us_photo_tool မှာအပြည့်အဝမထိုက်မတန်သည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပိုမိုအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
8. mail လိပ်စာ
အဆိုပါမေးလ်လိပ်စာအတွက် "၏စောင့်ရှောက်မှုခုနှစ်တွင်" ဟုလက်ခံ၏နာမတော်သည်။ သင်စာတိုက်ထဲမှာရနိုင်, သင့်စာတိုက်ကုဒ်မသိလျှင်သင့်ရဲ့လိပ်စာအပြည့်အဝမျဉ်း 1. အတွင်းကိုက်ညီလျှင်လိပ်စာလိုင်း2လယ်ကွင်းအလွတ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအင်္ဂလိပ်လိုသင့်ရဲ့လိပ်စာစာလုံးပေါင်းဖို့ဘယ်လိုမသိလျှင်မှန်ကန်စွာကို Google Maps ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်: အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ထီပုံစံလိပ်စာကူးယူပါ။
သင်ဟာယနေ့ခေတ်တွင်တိုက်ရိုက်အဘယ်မှာရှိ 9. နိုင်ငံ
ဒါဟာသင့်ရဲ့အမှန်တကယ်နေထိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်, သင့်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်ဇာစ်မြစ်၏တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူး။ စာရင်းထဲကတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျရွှေ့နိုင်သည်, သင်ပုံစံဖြည့်စွက်၏ယခုအချိန်တွင်သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာအတွက်ဖြည့်စွက်သင့်တယ်, အရေးမထားဘူး။
11. E-mail ကိုလိပ်စာ
12. သင်တို့သည်ယနေ့၏အဖြစ်, အောင်မြင်ပါပြီပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိကဘာလဲ?
ဒါဟာကောလိပ် (ဒီဂရီ) ၌ငါ၏နောက်ဆုံးတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ပညာရေးအဆင့်ကိုအကွောငျးဘာရေးရမလဲ?
အဆိုပါ DV ထီပုံစံ၌သင်တို့ကိုလျှောက်လွှာဖြည့်ရာကာလအပေါ်ရှိသင့်ပညာရေးအဆင့်ကိုပြောပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆင့်ဆင့်ဒီတော့ "High School တွင်မျှဒီဂရီ" သို့မဟုတ် "တချို့တက္ကသိုလ်သင်တန်းများ" သင်တို့အဘို့အသင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်အလုပ်အကိုင်အတွက်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအစီအစဉ် (eDV) အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ?
အလုပ်သမားဦးစီးဌာန (DOL) အို * Net ကအွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စအုပ်စုများအလုပ်အတွေ့အကြုံကိုငါးခုအလုပ်ဇုန်သို့။ များစွာသောအလုပ်အကိုင်အတွက် DOL ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်နေစဉ်, သာအချို့သောသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအစီအစဉ်များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီ။ သင့်ရဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏အခြေခံပေါ်မှာတစ်မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်, သငျသညျ, အတိတ်ငါးနှစ်အတွင်းယောဘဇုန်4သို့မဟုတ်5အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းတစ်ခုသိမ်းပိုက်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်, တစ်ဦး Specific အသက်မွေးမှုအဘိတ် (SVP) တွင်ခွဲခြားကြရပါမည် 7.0 သို့မဟုတ်မြင့်မား၏အကွာအဝေး။
ခြေစစ်ပွဲ DV အလုပ်အကိုင်အလုပ်သမားရေးရာအို * Net ကအွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စများဦးစီးဌာန https://www.onetonline.org/ အပေါ်ပြသနေကြသည်
က "ယောဘသည်မိသားစု" အပိုင်းမှာတော့့ dropdown ကနေသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုရွေးပါ (ဥပမာ, စီးပွားရေးကို select နှင့်ဘဏ္ဍာရေး Operations) နှင့် "Go" ကိုနှိပ်ပါ
သို့ပြုလျှင်သင်၏တိကျတဲ့သိမ်းပိုက်ဘို့ link ကို click လုပ်ပါ။ (ဥပမာအားဖြင့်, ခရက်ဒစ်လေ့လာသုံးသပ်သူများကို select)
ယောဘဇုန်အပိုင်းတစ် SVP Range ကိုရှာပါ။ ဒါဟာ DV ထီများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှ 7.0 အထက်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒီတော့ဒီဥပမာခရက်ဒစ် Analyst, အတွက်ငျြးပွညျ့မီ။
တရားဝင်ကွဲကွာကွာသောထက်ကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားကိုကြောင်းကိုသတိရပါ။ ဥပဒေရေးရာခွဲခြာကွာရှင်းတရားရုံးအမိန့်ကိုအောက်ပါဖြစ်သော်လည်း, ကိုလက်စသတ်ပေမယ့်စုံတွဲဆိတ်ကွယ်ရာမရှငျအခါတစ်ဦး status ကိုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအများအပြားထိုကဲ့သို့သောအဆင့်အတန်းမရှိကြပါဘူး။ သငျသညျကွာရှင်းကြသည်, သို့သော်သင်ဥပဒေရေးရာခွဲခြာရွေးမည်ဆိုပါက, သင်အရည်အချင်းပျက်ယွင်းလိမ့်မည်။
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်သောအမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ်သည်ဆိုပါက, သင့် entry ကိုသူ့ကိုသူ / သူမ၏စာရင်းပြုစုကြပါဘူး။
သငျသညျပုံစံဖြည့်စွက်၏ယခုအချိန်တွင်အဘို့သင့်လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေး status ကိုဖြည့်သင့်တယ်။
ကလေးများ၏ 14 နံပါတ်
သငျသညျလက်မထပ်ရသေးနှင့် 21 နှစျအောကျ၌နေသောသူအပေါင်းတို့သင်တို့၏သားသမီးစာရင်းပြုစုရပါမည်။ အားလုံးသင့်ရဲ့ဇီဝ, ခြေလှမ်းကလေးများသို့မဟုတ်တရားဝင်မွေးစားကလေးများပါဝင်သည်။ သင်မပွုလြှငျသငျအရည်အချင်းပျက်ယွင်းလိမ့်မည်။ သင်၏သားသမီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်လျှင်, သင်၏ entry ကိုမှာသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုကြပါဘူး။
အကြှနျုပျ၏ 21 နှစ်အောက်ကလေးများဒါပေမဲ့သူတို့သီးခြားစီနေထိုင်နေကြရသည်။ သူတို့ကိုငါစာရင်းပြုစုသငျ့သလော
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကမရှိတော့သငျနှငျ့အတူနေထိုင်သို့မဟုတ်သူတို့ကို DV program ကိုအောက်တွင်သို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရန်အဘို့အသငျသညျရည်ရွယ်ကြဘူးလျှင်ပင်, အသက် 21 နှစ်အောက်ကလေးများအားလုံးစာရင်းပြုစု။
15. အပိုင်း2- အနကျအဓိပ်ပါယျ
သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ကလေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပုံစံဖြည့်သင့်တယ်: နောက်ဆုံး / မိသားစုအမည်, ပထမအမည်, အလယျပိုငျးအမည်, မွေးသက္ကရာဇ်, ကျားမ, ကြင်ဖော် / ကလေးမွေးဖွားခဲ့သည်အဘယ်မှာရှိစီးတီး။ ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် / သားသမီးများ၏ဓာတ်ပုံကို upload ။ တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။
ငါသည်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပုံစံဖြည့်ပါလျှင်သူ / သူမကိုလည်း DV ထီအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနဲ့အနိုင်ရနေတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်းကိုဆိုလိုသလဲ
အဘယ်သူမျှမကသင်သည်အိမ်ထောင်ဖက်အနိုင်ရ (နှင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဆင်းသက်လာသကဲ့သို့သငျတို့ပါဝင်သည်သင့်ပါတယ်) ကိုအခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့သီးခြားပါဝင်သူအဖြစ်ရေတွက်ရန်သူ / သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဖြည့်သင့်တယ်။
ကျွန်မအနည်းငယ်ကလေးတစ်ဦးဓာတ်ပုံကို upload လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ်, သင်သည်မည်သည့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးဓာတ်ပုံကိုမပေးကြပါလျှင်, သင့်လျှောက်လွှာ USCIS ကလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအဘို့အ https://my.visafoto.com/diversity-visa-lottery-photo သုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။
ကံမကောင်းစွာပြီးနောက်သင် DV ထီထဲမှာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အတည်ပြုချက်အရေအတွက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်, ဒါကြောင့်ထီပုံစံတင်ပြပြီးနောက်သင်အတည်ပြုချက်ကိုအရေအတွက်အားကူးယူပြီးတော့အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျသို့ paste နဲ့ DV ထီအတည်ပြုချက်ကိုနံပါတ်၏ဘာသာရပ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဤသတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အတည်ပြုချက်နံပါတ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ပုံပါစေနှင့် (စသည်တို့ကို Google Drive ကို Dropbox, သင့်ရဲ့ flash drive ကိုကဲ့သို့) လုံခြုံရာအရပျ၌ဤစခရင်ပုံသိမ်းဆည်းပါ။ သင်တို့ကိုလည်းစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာချရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာဌာန၌ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်, သင့်ဖုန်းပေါ်မှာမှတ်စုများအတွက်အရေအတွက်ကကယ်တင်နိုင်ပါ။